Tattoo-yada Dunida Caalamku Ku Waxyooday | Tattoo
Tattoos ayaa u waxyooday adduunka adduunka
ka Tattoo oo xiriir la leh safarka Aad ayey u kala duwan yihiin dad badana way jecel yihiin iyaga, maadaama safarku yahay mid ka mid ah hiwaayadaha ugu caansan maanta. Waxaa jira dad badan oo jecel safarka oo aan ka waaban inaad sawirto wax xiriir la leh hiwaayadan.
Aan aragno qaar tattoos adduunka ayaa loo waxyooday, Faahfaahin noo sheegaysa rabitaankeena ku saabsan adduunka. Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' guud ahaan waxay u baahan yihiin faahfaahin weyn, in kasta oo ay jiraan siyaabo badan oo lagu qabsado dunidan.
1 Dunida dugsiga jir
2 Buufin leh shandad
3 Buufin midabyo ka buuxo
4 Buufin leh buufin biyo-biyo ah
5 Buufin iyo safarka
Dunida dugsiga jir
El qaabkii hore ee iskuulka ayaa ka mid ah kuwa ugu jecel waana hubaal inay naga caawinayso inaan abuurno tattoos waqti dheer soconaya. Waa qaab aan ka bixin qaab-dhismeedkiisa waxaana lagu qeexaa khadadkiisa ballaadhan ee si fiican loo qeexay. In kasta oo markan aynaan arkin midabbo, haddana waxay u muuqdaan inay leeyihiin midabbo dhalaalaya. Buufinku wuxuu leeyahay muuqaal kuu sheegaya dhadhankaas safarka, oo leh teendho, buuro iyo dab.
Buufin leh shandad
Este adduunka oo raadinaya xaqiiqo dheeraad ah. Waa midab aad u midab badan, oo leh midabada dabiiciga ah ee cagaaran, biyaha iyo dhulka. Laakiin sidoo kale waxay leedahay faahfaahin khiyaali ah oo ku jirta shandadaas oo noo sheegaysa sida safarku noo siinayo suurtagalnimada duulimaad iyo inaan xor ahaano.
Buufin midabyo ka buuxo
Xaaladdan oo kale waxaan aragnaa a Tattoo oo leh midabyo badan, in kastoo ay khiyaali yihiin. Tones sida lilac, buluug iyo cagaar ayaa isku qasan oo bixiya adduunyo adduunka gudahiisa ah. Hab kale oo lagu soo qabto dhadhankaas safarka.
Buufin leh buufin biyo-biyo ah
Este buufinku wuxuu leeyahay xoogaa taabasho biyo-biyood ah, farsamo aad u cusub. Waa nooc ka mid ah tattoosyada oo bixiya midab qurux badan.
Buufin iyo safarka
Waxaan ku dhamaaneynaa qurux Tattoo oo ina tusaya adduun si fiican loo qeexay iyadoo qof la safraya shandadiisa. Waa tatoof dhigaya geesiga adduunka korkiisa si uu u ogaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoos ayaa u waxyooday adduunka adduunka